Nonreciprocal प्रेम। को nonreciprocal प्रेम कसरी बच्न?
प्रेम nonreciprocal - कुनै एक प्रतिरक्षा छ एउटा अप्रिय भावना। को भन्दै "प्रेम, हुन सक्दैन" भन्ने कुनै आश्चर्य पुरातन समयका देखि हाम्रो दैनिक जीवनमा देखा पर्नुभयो। जो कोहीले चाहँदैनन्, प्रेम अस्वीकार गर्ने मानिसको भूमिका रहन। अहिलेसम्म यस्तो अवस्थामा एकदम अक्सर जीवनमा उत्पन्न हुन्छ। आफूलाई लागि न्यूनतम घाटा यो दुःखद घटना कसरी हटाउन, चिन्ता कसरी रोक्न र उदास हुन - यो लेख हेर्नुहोस्।
प्रेम वा लत
कि त्यहाँ nonreciprocal प्रेम छ? यो प्रश्न मा जवाफ सरल छ: पाठ्यक्रम! र यो उदाहरण प्रशस्त। यस कविता, गीत, उपन्यास, र को विषय मा चलचित्र को सबै भन्दा unrequited प्रेम। हामी कसरी लोकप्रिय काम को हीरो को समस्या सामना गर्न हेर्न इच्छुक छन्। तपाईं पनि त्यस्तै अवस्थामा आफूलाई फेला भने र के तपाईं के गर्नुहुन्छ?
पारस्परिक प्रेम, खराब घाउ निको पार्नुहुन्छ प्रेरित र एक व्यक्ति पूर्ण आनन्द को एक भावना दिन्छ। तर, प्रेम अक्सर एक गैर-पारस्परिक छ। यस दुःखी तथ्याङ्क लगभग हरेक दोस्रो व्यक्ति भावना नै छैन जहाँ एक अवस्था संग जीवनमा सामना भनेर देखाउँछ।
केही मानिसहरू सजिलै स्विच यो दुःखद घटना बोक्न गर्न सक्षम छन्। अरूलाई लामो समय को लागि पीडित को एक राज्य मा अड्केको प्राप्त हुन सक्छ।
मनोवैज्ञानिक एक अर्थमा साझा प्रेमले को र प्रेम लत। साँचो प्रेम - रोयल्टी-मुक्त भावना छ। उहाँले छ रूपमा, बदलामा केहि राखेका छैन त यो आफ्नो adoration को वस्तु लिन्छ किनभने मायालु व्यक्ति, शान्तपूर्वक विफलता स्वीकार गर्न सक्षम छ। माफ गर्नुहोस्, तर यो प्रेम को प्रकारको धेरै दुर्लभ छ।
प्रायजसो मा, nonreciprocal प्रेम धेरै विवादास्पद र अप्रिय sensations छ। एक प्रेम एक को घटना मा पीडित एक व्यक्तिले आफ्नो adoration को वस्तु को नैतिक विमान निर्भर हुन्छ भन्ने हो। यस मामला मा, तपाईं फेरि जीवनको आनन्द महसुस गर्न केही कदम लिन नयाँ भावना सम्म खोल्न र निराशा को राज्य मा एक स्थायी निवास सँग सम्बन्धित समस्या जोगिन आवश्यक छ।
एक वास्तविक भावना वा: यो तपाईं भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ, सुरु गर्न प्रेम सम्बन्ध? तपाईंको अर्थमा तपाईं मात्र सुखद भावना ल्याउँछ भने - तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ, तपाईं अनावश्यक प्रेम प्रेम गर्न सक्षम छन्। बेचैनी तपाईं अनुभव भावना कसलाई व्यक्ति निर्भर छन् भन्ने हो।
मनोवैज्ञानिक लामो अलार्म लग गरिएको छ: nonreciprocal प्रेम हो जो मानव स्वास्थ्य मा सबै भन्दा अनुकूल प्रभाव छैन depressive विकार, entails।
कसरी गैर-पारस्परिक प्रेम को छुटकारा प्राप्त गर्न? सबै को पहिलो तपाईं मात्र स्थिति exacerbate गर्न सक्ने साधारण गल्ती नगर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
आफैलाई सँगै पुल गर्न प्रयास गर्नुहोस्। आँसु र आत्म-दया केहि परिवर्तन गर्दैन। तपाईं मात्र सुन्निएको अनुहार, रातो आँखा र थकित समग्र उपस्थिति प्राप्त। यसबाहेक, स्थिति एक यस्तो प्रतिक्रिया नकारात्मक भन्दा अन्य केहि ल्याउन छैन, तपाईंलाई ट्युन गर्न सक्षम र सही निर्णय लिन छैन।
यस समयमा एकाकीपनको लागि छैन! सँगै हिंड्न संवाद, सबै आफ्नो मुक्त समय को साधारण मामिलामा लिन: मित्र बीच हुन प्रयास गर्नुहोस्।
आफ्नो निराशा जफत छैन। अतिरिक्त किलो र खाना लत gluttony अलग्गै कुनै पनि थप परिणाम ल्याउन छैन।
कसरी निको सुरु गर्न
गर्न पहिलो कुरा मात्र तपाईं आफैलाई मदत गर्न सक्छ भनेर बुझ्न छ। कुनै एक आफैलाई भन्दा अन्य, छैन दुःख, पीडा र निराशाले तपाईं अस्वीकार गरेका छन् भन्ने तथ्यलाई सम्बन्धित हटाउन सक्षम छ।
मनोवैज्ञानिक सिफारिस: एक पूर्ण जीवन सुरु गर्नुहोस्। जीवनको हरेक क्षण बर्बाद थिएन भन्ने सुनिश्चित गर्न हरेक प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं नयाँ र केही अज्ञात आफ्नो तीतो विचार देखि "स्विच" गर्न अघि प्रयास गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, एक फिटनेस क्लब सामेल र चित्रकला, अध्ययन भाषाहरू सुरु, नृत्य जाने ...
आफ्नो नयाँ उपलब्धिहरू माथि योग ओछ्यानमा जानुअघि हरेक दिन: एक नियम पालन। समय तपाईं आफ्नो सफलता रमाइलो गर्न सिक्न, र यो एकदम छ आत्म-सम्मान बढाउँछ। राम्रो लागि आफ्नो परिवर्तनहरू unnoticed हुने छैन, र चाँडै आफ्नो वातावरण तपाईं आपसी भावना हुनेछ कोसँग व्यक्ति हुनेछ निश्चित हुनुहोस्।
को पुल बाल्न
को nonreciprocal प्रेम कसरी बच्न? यसलाई पराजित गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका - तपाईं महसुस अस्वीकार गर्ने व्यक्ति बिर्सन्छन्। तपाईंले केही निर्देशन पालना भने सजिलो बनाउन।
तपाईं यो व्यक्ति कुरा भयो कि दृष्टि उपहार, फोटो, राम्रो हृदय trinkets मेरो क्षेत्र हटाउन।
आफ्नो वातावरण मानिसहरूलाई तपाईं को लागि खेद महसुस गर्न निषेध। भावना को कमी मा छलफल र रिस उठ्दैन रोक्नुहोस्। तपाईं भूल प्रयास गर्दै परिचित एक व्यक्ति बारे कुनै पनि कथाहरू दबाउनुहोस्।
केही संगीत अनुत्तरित अर्थमा संग जोडिएको आफ्नो पीडादायी संगतले कारण छ भने, यसलाई मेटाउन र सुन्न छैन।
तपाईं तीतो स्मरण र विचार यो अवस्था सम्बन्धित झटका गर्न सक्षम छन् कि स्थानहरू जोगिन।
nonreciprocal प्रेम तपाईं responsibly यो सल्लाह प्रतिक्रिया र के भयो तपाईंलाई सम्झाउने सक्छ केहि आफूलाई जोगाउन भने, पृष्ठभूमि मा चाँडै जान्छ।
आफैलाई ज्यादै पुलपुल्याउने
सँग सम्बन्धित निराशा को छुटकारा हुन्छ मानिस unrequited प्रेम, एक उज्ज्वल, सकारात्मक भावना आवश्यक छ। आफैलाई ज्यादै पुलपुल्याउने गर्न तपाईं के चाहनुहुन्छ आफैलाई दिन नडराऊ, आफ्नो अनुहार मा एक मुस्कान हुन सक्छ, आनन्द दिन्छ।
आफैलाई समय दिनुहोस्। को सना भ्रमण, एक फेसनदार मैनीक्योर, नयाँ hairdo बनाउन। तपाईं घरमा बबल स्नान र अनुहार मास्क सीमित गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा - प्रक्रिया रमाइलो गर्न, अझ राम्रो र विश्वस्त हुन्छन्।
किनमेल जाने र आफूलाई एउटा उपहार के, को लामो सपना देख्यो छ भन्ने कुरा किन्न।
यस्तो कार्यहरू निकै आत्म-सम्मान बढ्छ। तपाईं प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ भने - प्रेम सुरु गर्न। धेरै प्रिय र प्रिय मानिसको रूपमा आफैलाई व्यवहार गर्छन्। यो दृष्टिकोण विचित्रताहरू काम गर्दछ: radiating आनन्द र आत्म-विश्वास, तपाईं सकारात्मक भावना धेरै आफ्नो जीवन मा आकर्षित हुनेछ।
जस्तै उपायहरु जस्तै
सम्झना nonreciprocal प्रेम - अस्थायी कण्टक। राम्ररी हेर - मान्छे तपाईंसँग कुराकानी गर्न चाहने धेरै द्वारा कमै मात्र छन्। चिन्ने, सायद यो तिनीहरूलाई बीचमा छ किनभने तपाईंको भाग्य छ, आफ्नो जीवन नयाँ मान्छे तिनीहरूलाई चासो देखाउन मा दिनु।
unrequited प्रेम आशक्त रही जोगिन प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईं व्यक्ति भावना भइरहेको जसलाई लिनु दिनु छैन, ढिलाइ छैन कि हेर्न भने, तुरुन्तै कदम चाल्न थाल्छन्। छिटो तपाईं आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो भाग्य ले, को छिटो जीवन फेरि रमाइलो गर्न सुरु "प्राप्त राम्रो" र।
कसरी एक महिला आत्म-सम्मान जुटाउने? कसरी जुटाउने विश्वासघात पछि एक महिला आत्म-सम्मान
अनातोली Dobin, मनोवैज्ञानिक: जीवनी, क्रियाकलाप र समीक्षा
उत्तेजना - यो एक संकेत हो। के?
कार "साब 9-5": प्राविधिक विशेषताहरु, लाभ र बेफाइदा, समीक्षा
"Chonki" अस्पताल। बेलारुस को स्वास्थ्य रिसोर्ट्स। अस्पताल "Chonki" Gomel क्षेत्र
एलिजाबेथ Berkley: Filmography र अभिनेत्री व्यक्तिगत जीवन
सेतो माछा सस, पास्ता र पिज्जा
Sergey Skuratov - कम्पनी "Sergey Skuratov आर्किटेक्ट्स गर्नुभएको" को अध्यक्ष
भिटामिन "क्याल्किन अग्रिम": समीक्षा, प्रयोग र संकेतमा निर्देशन
तपाईं यूटा राष्ट्रिय पार्क किन भ्रमण गर्नुपर्छ?
प्रसिद्ध आकर्षण: Palekh (इभ्यानोभो क्षेत्र)
कसरी कराइ मा पोर्क खाना पकाउनु?
दिन हिजो व्यापार को कार्यकर्ता र आज को